DAAWO: Falanqeyn & Xog: Sh Roobow oo loo geyn doono Xasan D. Aweys & Wadahalo meel wanaagsan maraya. – Xeernews24
DAAWO: Falanqeyn & Xog: Sh Roobow oo loo geyn doono Xasan D. Aweys & Wadahalo meel wanaagsan maraya.
14. August 2017 /in VIDEO/AUDIO /von admin
Dowladda Soomaaliya ayaa gacanta ku haysa Sh Muqtara Roobow Abuu Mansuur kaas oo mudo dheer katirsanaa Kooxda Shabaab.
Inkastoo uu ka baxay Shabaab, hadana waxaa la filayaa inuu si rasmi ah u xaqiijiyo siyaasadiisa cusub iyo hadii uu dowladda la shaqeyn doono.
Wasiirka Dastuurka Maamulka Koofur Galbeed iyo afhayeenkii hore ee Xisbul Islaam ayaa sheegay in la qorsheynayo in wadaadka la geeyo guriga uu ku sugan yahay Sh Xasan Daahir Aweys oo xili hore kasoo goostay Shabaab.
“Dowladda ayaa go’aanka leh, laakiin ma ahan qorshaha in horey laga sii daayo, waa inuu maraa baaritaano badan oo xataa waxaa loo geynayaa Sh Xasan Daahir Aweys”ayuu yiri C/llahi Sh Xasan oo ah Wasiirka Dastuurka Koofur Galbeed.
Dowladda ayaa la filayaa iney cadeyso mowqifkooda ku aadan wadaadka Roobow oo haatan wadahadalo la leh dowladda.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/08/war1-180x135.jpg 135 180 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-08-14 09:19:322017-08-14 09:19:32DAAWO: Falanqeyn & Xog: Sh Roobow oo loo geyn doono Xasan D. Aweys & Wadahalo meel wanaagsan maraya.
Xogo kaa Qarsoon oo ku saabsan Mukhtaar Roobow iyo waayihiisa Shabaabnimo. DAAWO SAWIRRADA:- Munaasabadda Maalinta Dhalinyarada Aduunka Oo Muqdisho Ka...